Home Wararka Maanta Mucaaradka oo ka hor yimid go’aankii xalay fariina u diray golaha wadatashiga...
Mucaaradka oo ka hor yimid go’aankii xalay fariina u diray golaha wadatashiga qaran
Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ah midowga musharaxiinta ayaa qabtay shir jaraa’id oo uu kaga hadlay dib u dhaca ku yimid doorashooyinka golaha shacabka oo qorshuhu ahaa in lasoo gabagabeeyo Jimcihii maanta.
Daahir Geelle ayaa sheegay in wax duruuf ah oo sababi karay in doorashada dib loo dhigo aysan jirin, isagoo naqdiyey bayaankii xalay ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka oo lagu shaaciyey in 20 cisho lagu daray doorashada.
“Xalay waxaan dhageysanay kulankii golaha wadatashiga qaranka oo ay ku go’aamiyeen dib u dhigidda doorashooyinka, haba yaraatee wax duruufa oo keeni karay dib u dhigidaas ma jiraan, waxaan aaminsanahay hadii daacad loo yahay in doorashada baarlamaanka lagu soo dhamey karay bilowgii ama bartamihii bishaan,” ayuu yiri Daahir Geelle.
Musharax Daahir Geelle oo mar ahaa afhayeenka midowga musharaxiinta ayaa sheegay in cagajiid badan oo sababay in waqtigu dhamaado ay sameeyeen madaxda golaha wadatashiga qaranka, isagoo cadeeyey inay aad uga xunyihiin dib u dhacaan mar kale ku yimid doorashada dalka.
“Doorashooyinka daahaya waxay dalka gaarsiiyeen meesha uu maanta joogo, meel kasta oo dadkeenu joogo nolosha ayaa aad ugu adag, doorashooyinka ayaa rajo abuuri lahaa oo keeni lahaa hoggaan wax ka bedela sidii hore, dib u dhigidaan sanadka dhaaftay ayaa sababtay in dadka Soomaaliyeed ay wajahaan duruufahaan adag,” ayuu Daahir Geelle hadalkiisa ku sii daray.
Waxuu codsaday in doorashooyinka la dedejiyo, “Aadna waa uga xunahay arrinkii xalay soo baxay ee golaha wadatashiga ka soo yeeray, waxaan dalbaneynaa in dib u dhac dambe uusan dhicin,” ayuu yiri.
Golaha wadatashiga qaranka oo ka kooban Ra’iisul wasaare Rooble iyo madax goboleedyada dalka ayaa xalay ka shiray arrimaha doorashada, waxayna kordhiyeen waqtigii loo asteeyey in lagu soo gabagabeeyo doorashada oo ku e kaa 25-ka bishaan oo Jimcihii maanta ku beegneyd.
Golaha ayaa xalay go’aamiyey in 15-ka bisha soo socota lasoo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka, si loo aado doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha dalka, ilaa hadda waxaa doortay kala-bar xubnihii baarlamaanka dalka, waxaana dhiman oo aan weli lasoo dooran, tiro aan ka yareyn inta la doortay.